Eritrea oo codsatay inay ku laabato IGAD - BBC News Somali
Eritrea oo codsatay inay ku laabato IGAD
Image caption Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki,
IGAD ayaa sheegtay inay tixgelineyso codsiga Eritrea ee ah inay ku laabato ururka, kadib markii ay isaga baxday muddo afar sano laga joogo.
Waxa ay ku xiran tahay xubnaha urur goboleedka IGAD inay aqbalaan codsiga iyo in kale.
Talaabadaasi waxaa loo arkay isku day lagu dhameynayo sanado ay go'doon ku jirtay
Qaramada Midoobay ayaa toddobaakii hore waxa ay Eritrea ku eedeeysay inay maleegeysay shirqool bam shirkii Midowga Afrika Janaayo lagu qabtay Addis Ababa - taasi oo ay beenisay Eritrea.
Waxaa kale oo ay diiday eedeeymo ah inay hub si qarsoodi ah ugu dirto kooxda Islaamiga ee al-Shabaab.
Dadka indha indheeya arrimahan ayaa sheegaya in talaabadan ay ujeedadeedu tahay sidii ay uga dheeraan lahayd in la xoojiyo cunaqabateynta Qaramada Midoobay.
Cunaqabateynta ayaa lagu soo rogay 2009 markii Eritrea lagu eedeeyay inay taageerto al-Shabaab oo xiriir la leh al-Qaacida.
Xoghayaha Guud ee IGAD Maxbuub Macalin ayaa warqad u qoray wasiirka arrimaha dibedda ee Eritrea Cismaan Saalax, taasi oo uu ku soo dhaweynayo o'aanka waddankiisu qaatay.
"waan ku kalsoonahay in dalalka xubnaha IGAD, hey'adaha horumarinta la wadaagga ah IGAD iyo dhamaan dhinacyada IGAD inay ku farxi doonaan in Eritrea ay ku soo laabato qoyska IGAD" ayuu yiri Maxbuub.
Eritrea waxa ay xornimadeeda ka qaadatay waddanka Ethiopia sanadkii 1993 laakiin labada waddan waxaa dhexmaray dagaal markiiba kaasi oo socday 1998-2000, waxaana uu ku saabsanaa muran dhinaca soohdinta ah.
Eritrea waxa ay reer galbeedka ku eedeeysaa in aanay cadaadis ku filan saarin Ethiopia oo xulafo la ah Mareykanka inay xushmeyso guddigii caalamiga ahaa ee soo saaray inay ay isaga baxdo magaalada Badme, oo dagaalku ka bilowday.
Eritrea waxa at IGAD ka baxday 2007, markii dalalka uu ka kooban yahay ee Kenya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Somalia - ay taageereen faragelintii Ethiopia ee Somaaliya ee awoodda looga tuuray kooxihii islaamiyiinta.
Eritrea waxa ay ay sidoo kale goysay xiriirkii hey'adaha caalamiga ah ee gargaarka, waxaana ay beenisaa warbixinta Qaramada Midoobay ee ah inay saameysay abaarta ka jirta BarigaAfrika.